Intandokazi abesifazane abaningi, umnikazi ukubukeka abukhali - ke Pletnev Kirill Vladimirovich. Umlingisi Filmography kuhlanganisa inqwaba izithombe ezithakazelisayo nokusha.
It uya ababemenyelwe sokudubula, kodwa ezithakazelisayo kungenye Eqinisweni: Kirill Pletnev - umqondisi, futhi abahlakaniphe kakhulu. Umsebenzi wakhe manje kuqashelwa njengoba izilaleli, kanti censors.
Ebuntwaneni emakamu, noma njengoba uhlamvu omnene
Disemba 30, 1979, Kirill wazalwa. Kudabuka khona umdlali laseKharkov (Ukraine), kodwa cishe ngokushesha ngemva kokuzalwa, abazali wakhe bathuthela Leningrad. Kirill iziqu esikoleni eLeningrad nge obuthile. Iqiniso liwukuthi kusukela zisencane umxhwele umdlalo Bruce Lee uCyril kwahluka pugnacity ekhethekile. Lena ngezinga elithile, wadlala indima ebalulekile esikhathini esizayo alo. Ubaba nendodana wabhala esigabeni Taekwondo, nomame, umntwana akubi "chump abanonya", njalo ehlobo wamthatha ekamu lezingane sika, lapho esebenza njengomfundisi umdanso. Ekamu Kirill efana Taekwondo ngaphezulu, lapho esemdala esizayo umlingisi waya baya ekamu * lama kakade siqu njengomfundisi weZwi umdanso. Kube wahlela studio waseshashalazini kanye itoho abasebenza chef ekhishini umsizi. By the way, Petersburg, Kirill wamabhuku umsizi ekhishini isikhathi esingaphezu konyaka.
By the way, esikoleni lapho afundela khona uCyril wayengowaseBetsayida, labasubathi "Zenith", kodwa ibhola akukaze eladonsa umlingisi, ngakho-ke njalo yoniwa amakilasi futhi kuholela ukugxumela nengxenye leqembu. Omunye umdlalo Kirill ukuthi ukugibela kule minyaka esikoleni esiphakeme. Kodwa intshiseko enkulu wabonakaliswa esikhathini umbuthano ezigcawugcawu. Kirill ebuntwaneni eziningi Ukufundwa zisencane wayejwayelene umsebenzi abalobi abaningi zihlaba kanye izimbongi.
isikhathi Students, noma kanjani Pletnev eMnyangweni oqondisa akazange athathe
Kirill kuphothula esikoleni esiphakeme ngo-1996. Mayelana ukuqeqeshwa kwakhe esikhathini esizayo wazazi kusengaphambili - Ngithanda ukufaka uMnyango oqondisa uhlelo Petersburg Theatre Academy. Nokho, ukuze umfana oneminyaka engu-16 ubudala azange abe - ayizange iphumelele ngeminyaka, futhi welulekwa ukuba zidlule oyibamba amakilasi. Kirill asilalela iseluleko, futhi ngo-3 Yiqiniso nengxenye ukusebenza ezigcawugcawu esekelwe imisebenzi ku-internet Ivana Bunina "Case Cornet Elagina" futhi "Case Cornet Orlov." Ngalesi sikhathi kuso bese bayavisisa yaba umsebenzi wokuphila kwabo. Pletnev waqaphela ukuthi, njengoba kumdlali, ungase futhi liqalise umbono wabo, ukuqonda indima esiteji, kanye filmmaker. Ngakho-ke, zonke emafilimini Kirill Pletnev kuhluke engavamile, romance kanye imfihlakalo.
Ngemva kokuthola iziqu Academy Kirill Ngaqala ukufuna umsebenzi, kodwa amatiyetha sendawo nabalingisi osemusha akazange kudingeka. Ngakho, njengamanye amadoda amaningi amancane, UCyril wabe ayokuhlula inhlokodolobha umama - eMoscow. Pletnev kwaba qembu Armena Dzhigarhanyana, lapho ayesebenza khona iminyaka engu-3. Ngesikhathi sakhe nge Armen Borisovichem Kirill wayedlala e ukusebenza elandelayo: "The tale the cat usosayensi", "U-Inspector General" nabanye. UCyril kwesokunxele enkundleni yemidlalo, hhayi ngoba bethanda - waxoshwa. Into wukuthi Pletnev ayengenakuziletha yena ukudlala indima akakuthandanga, kuhlukile nge nomqondo oyifunayo yangempela ekuphileni ezigcawugcawu. Bophezela ukuzijayeza bebodwa kwaba ukuhlushwa ukuze Pletnev. Ngakho wabonga Dzhigarkhanyan ngokwengxenye ngoba wanquma kusheshiswe ngenakugwemeka.
Okunye okudala Kirill Pletnev
Sibambisane nabagcini Irina Keruchenko waqala ngo-2003. Naye-ke ukhululekile ukusebenza, base ezifanayo bemvelo, basuke ngokulinganayo wazibona lezi noma ezinye izithombe, ebekiwe izinhlamvu izinhlamvu, echaza izenzo zabo. Ngemva kweminyaka emibili yomsebenzi ngokuhlanganyela Keruchenko futhi Pletnev waklonyeliswa umklomelo emkhosini "Drama okusha". Futhi ngonyaka ozayo Pletnev Kudlalwe play "Hedda Gabler." Umdlalo iwine umkhosi "play Norwegian esiteji eMoscow." Ngo-2008, Kirill Pletnev kufanele umklomelo we iphephandaba "Moskovsky Komsomolets abahlukaniselwa lo" msebenzi kuphrojekthi "Mina -. A umdubuli kambayimbayi umshini" izindima Theatrical uCyril ngemuva kancane, kodwa umlingisi enza ithemba. Kwelinye izingxoxo zakhe Pletnev uthe ufuna ukudlala esiteji Othello, uCaligula, umhloli jikelele, futhi Rogozhina Treplev.
Filmography Kirill Pletnev
In the movie, Kirill Pletnev kufika ngo-2001. Iqhaza aseqala waya umlingisi ethandwayo TV ewuchungechunge "amandla ezibulalayo". By the way, Filmography Kirill Pletnev ihlanganisa eziningi amabhayisikobho yimpumelelo enikelwe izifundo lamasosha, lapho uCyril uthola indima empini naphezu kweqiniso lokuthi umlingisi akazange sebuthweni, futhi akuhlangene ne zamabutho empi.
Ama-movie ne Kirill Pletnev njalo izibukeli ngimangele. Iqhaza kuqala lokho kwamlethela ukuqashelwa, kwathiwa ukudlalwa ifilimu "mcekeli phansi". Ngemva indima uSergeant Nelipa e "Ithrophikhi" kwagcizelela kuphela labo abanesithakazelo ukuba umlingisi. Filmography Kirill Pletnev ukhishwa indima uWarrant Officer Frolov e ifilimu ukuthusa "Admiral". Kirill futhi babhekana kahle lesikhulu sombutho Kudinov indima ifilimu "Landing Amandla," kanye nendima edlalwa yi-Alexei e ifilimu "ehlathini. Ukusinda Course ".
Namuhla udumo umlingisi liyaqhubeka likhula. Ngakho, melodrama Kirill Pletnev libanakekele ekhethekile. Ngokwe-umlingisi, unesithakazelo umkhuba ukuguqulwa, a reprogramming ngokuphelele ngokomzimba. Ngakho-ke, ukuze sandise indima futhi uhambe ngalé "izindima bamabutho 'Kirill ngokuvamile bavumelane izindima ogawuthola, Awama-Melodrama. Pletnev nesithakazelo inqubo kumiswa isithombe esisha, ngempela ngokungafani esedlule, abadlale izinhlamvu zabo. kokuphefumlela kwaKhe, umlingisi abasha uthi uRobert De Niro e ifilimu Scorsese sika "Raging Bull."
Yiqiniso, i-uchungechunge Kirill Pletnev iyiphi zonke, kodwa akavumelani ushiye ithemba ukubuyela kule isiqondiso bese adubule ifilimu yakhe. Ukuze wenze lokhu, umlingisi ngo-2014 wathola iziqu ngempumelelo faculty of screenwriting futhi ifilimu oqondisa at VGIK. By endleleni, umsebenzi wakhe wokugcina, "Nastia" waklonyeliswa Grand Prix ngesikhathi "Kinotavr-2015" kusigaba "Kuhle iDemo Film".
Namuhla-ke akuyona nje umqondisi sika umklomelo umlingisi. Filmography Kirill Pletnev uye agcwaliswa amafilimu ayo "Inja kanye benhliziyo 'futhi' 6.23". La mafilimu zaziphawuleka ngokungabi eziningi imiklomelo.
UCyril wayengakaze azibheke njengoba umdlali wamabhayisikobho owaziwayo, ezibiza neyaziwayo emibuthanweni ebanzi. Kodwa ama-movie ne Kirill Pletnev bayahlanya ethandwa. amantombazane nabesifazane abaningi bheka kubo kuphela ngoba indima eyinhloko noma lesibili eyadlalwa umlingisi abawuthandayo.
Pletnev ngeke ayeke khona. Ngokwe-umlingisi, ukuphila kwakhe okudala sekuqalile nje. Ngokuqinisekile amacebo Kirill Pletnev - a ukusebenzisana Danila Kozlovsky e "amaViking", lapho Pletnev udlala Oleg - umzalwane Prince uVladimir (indima Prince uVladimir wenza Danila Kozlovsky). Cishe isithombe bayokhululwa 2017. Futhi Filmography Kirill Pletnev wanezela nesinye lengqondo ephelele.
Osaziwayo abaningi rastolstevshie (izithombe)
Ibhola umdlali u-Aleksey Baharev: Biography, ukuphila siqu futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Swedish hockey umdlali Erik Karlsson: Biography, kwezemidlalo, empilweni yakho
Rupert Grint Emma Watson (esesithombeni)
Imisebenzi yangaphandle ngezimali kanye ngezimali sangaphakathi ibhizinisi: izinhlobo, ngezigaba kanye nezici
Chitha usuku ukuthandana futhi kusihlwa kanye yokudlela "Swan Lake"!
Vibration Namandla ngesilinganiso isethi: Izimbangela
Izincwadi Aleksandry Marininoy ngokulandelana kwezenzakalo. Marina sika Izincwadi: Uhlu